Huawei dia nanao pataloha smartwatch hahafahanao mitahiry ny headphones | Androidsis
Ny tsenan'ny smartwatch dia mitombo haingana. Noho izany, hitantsika fa mihabetsaka ny marika manana izany. Huawei koa dia miasa amina modely vaovao, toy ny patanty vaovao nosoratan'izy ireo. Famantaranandro mamela anao hitahiry ny headphones noho ny efitrano iray tafiditra ao aminy. Tsy misy isalasalana, famolavolana tena mahaliana.
Na dia patanty vaovao an'ny marika sinoa aza izy io. Amin'izay mba mbola tsy fantatra raha ho hitantsika eny amin'ny tsena ity Huawei smartwatch ity ato ho ato. Fa hahaliana ny mahita azy io amin'ny fotoana iray. Inona no entin'ny famantaranandro ho antsika?
Amin'ireto sary ireto izay nopotsahan'ilay marika sinoa, afaka jerentsika ny fomba fampidirana ireo headphones ho ao amin'ilay famantaranandro. Noho izany dia ho mahazo aina kokoa ny mpampiasa raha afaka mitafy azy ireo. Amin'ity tranga manokana ity dia momba ny headphones tsy misy tariby, avy any Huawei, mazava ho azy.
Fantatry ny marika ny maha-zava-dehibe ny fanavaozana amin'ny lafiny endrika, ary hanamora ny fiainana ho an'ny mpampiasa. Amin'izany fomba izany, ny headphones voatahiry ao amin'ny famantaranandro dia horaisina rehefa tsy hampiasaina izy ireo. Araka izany, sorohinao ny fahaverezanao.
Ny fampidirana izay kasain'i Huawei amin'ity sary ity dia mety hahaliana, satria mitarika fampifangaroana tsaratsara kokoa amin'ny kojakoja fa hivoatra ny marika. Saingy, amin'izao fotoana izao dia tsy manana fampahalalana momba an'ity smartwatch avy amin'ny orinasa ity izahay. Ka manantena izahay fa handre bebe kokoa ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Azo antoka fa patanty hafa io ary mety ho tianao rehefa mahatratra ny tsena. Ankoatr'izay, asehony fa Huawei dia afaka manolotra be dia be amin'ny sehatra fifaninanana toy izany toy ny smartwatch androany. Ahoana ny hevitrao momba ity patantoky ny marika sinoa ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Huawei dia nanao pataloha smartwatch hahafahanao mitahiry ny headphones
Ireo telefaona matanjaka 10 mahery tamin'ny volana jona 2018, raha ny filazan'ny AnTuTu Benchmark